Home > Products > LED Strip Light > CCT COB LED ကြိုး၊ > 20W 1008 Leds/M CW And WW Tunable COB LED Strip Light
1. 20W 1008 leds / m CW နှင့် WW ညှိနိုင်သော COB LED မီးချောင်းအလင်း၏ ၁. ထုတ်ကုန်နိဒါန်း
20W 1008 Leds / m CW နှင့် WW ညှိနိုင်သော COB LED မီးရောင်အလင်းကိုအရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုနောက်ကျောဘက်ရှိ 3M ကော်တိပ်ဖြင့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးဟိုတယ်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ၊ ဗီဒိုများ၊
ထုတ်ကုန်အမည်: 20W 1008 leds/m CW and WW tunable COB LED strip light အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP20
Model No.: LION-ND1D24DD20-B9-1008 operating Temp .: -25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ + 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
FPC Width: 12mm Storage Temp.: -25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ + 70 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Light source: COB LED Standard Length: ၅ မီတာ
COB အရေအတွက်: 504 CW + 504 WW ခုတ်နိုင်သောအရှည် 41mm
LED အရောင်: Tunable White Certification:
အရောင် Temp .: 2700K နှင့် 6500K tunable အာမခံချက် -3years
CRI: ≥90 တစ်သက်တာ: 50000 hrs
Beam ထောင့် 180° အချက်အလက်ထုပ်ပိုး။ : 50 reels/box,
WW: 1300lm / m သေတ္တာအရွယ်အစား: 500*356*206mm
အလုပ်လုပ်သောဗို့အား: 24V တစ်ဘူးလျှင် G.W ၈ ကီလိုဂရမ် (IP20)
ပါဝါ: 20W/m လျှောက်လွှာ corner decoration, contour lighting, KTV, shopping mall, cabinet etc.
၃။ ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ၂၀W ၁၀၀၈ leds / m CW နှင့် WW ညှိနိုင်သော COB LED မီးအလင်းရောင်၏လျှောက်လွှာ
Adjustable- 55.5mm တိုင်းရှိနိုင်သည်
၅၀WW ၁၀၀၈ leds / m CW နှင့် WW ညှိနိုင်သော COB LED ချွတ်မီး၏တာ ၀ န်၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ 20W 1008 Leds / m CW နှင့် WW ညှိနိုင်သော COB LED ချွတ်မီးများသည်အလွန်လေးလံသောတာဝန်ရှိသည့်ပစ္စည်းများနှင့်ထုပ်ပိုးထားသဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ၀ တ်ဆင်ရန်မပျက်စီးနိုင်ပါ။ အသေးစားသို့မဟုတ်နမူနာအမှာစာများကိုအမြန်ဆုံး UPS၊ FedEx သို့မဟုတ် DHL မှဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ အလွန်ကြီးမားသောအမှာစာများအတွက်ပင်လယ်ကုန်တင်ပိုပိုသည်။
hot Tags:: 20W 1008 Leds/M CW And WW Tunable COB LED Strip Light, Manufacturers, Suppliers, Wholesale, Buy, Factory, Customized, Made in China, Free Sample, Price List, Advanced, Fashion, Quality